के तपाइँ आफ्नो धुमपान लत छुटाउन चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने एकपटक पढ्ने कि ? - KlipMandu
मह :महमा भिटामिन, एन्जाइम र प्रोटिन हुन्छ । नियमित मह सेवन गर्दा सजिलैसँग धूमपानको आदतबाट छुट्कारा पाउन सहयोग मिल्छ । दिनहुँ शुद्ध मह सेवन गर्दा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुदै जान्छ ।
जौको चिउरा : जौ को चिउरा ले शरीरमा भएका घातक विषाक्त पदार्थ शरिर बाहिर निकालेर धूमपानको चाहना कम गर्न सहयोग पु¥याउछ । ‘धुम्रपान’ छोडेपछि हुने असहज परिस्थितिलाई ‘नियन्त्रण गर्न पनि यसले महत्व पूर्ण भूमिका निवार्ह गर्दछ ।
← बाँदरले जिस्काउँदा युवतीको कपडा नै च्यातिएपछि
कुबेतमा एक नेपाली चेलीको बिजोग, चोरीको आरोप लगाउदै कुट पिट. →
November 21, 2017 klipmandu 0